စကားလုံးပြုပြင်ရေးကိရိယာ။ Word ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆော့ဝဲ။ DOC & DOCX ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူပါ။
DataNumen Word Repair အဆိုပါဖြစ်ပါသည် အကောင်းဆုံး Word တွင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိရိယာ။ ၎င်းသည်ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသော Word doc & docx စာရွက်စာတမ်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သမျှပြန်လည်ရယူနိုင်ခြင်းဖြင့်ဖိုင်အကျင့်ပျက်ပြားမှုဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် DataNumen Word Repair?
ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းသည်မီတာဖြစ်သည်ost နှုတ်ကပတ်တော်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးထုတ်ကုန်၏အရေးကြီးသောစံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောစစ်ဆေးမှုများအပေါ် အခြေခံ၍၊ DataNumen Word Repair အကောင်းဆုံးပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းရှိပါတယ်စျေးကွက်ရှိအခြားပြိုင်ဖက်များထက်များစွာပိုကောင်းသည်။
ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ DataNumen Word Repair ယှဉ်ပြိုင်ဆေးလိပ်သောက်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်သင်၏ MS Office ဖိုင်အကြောင်းအရာပြန်လည်နာလန်ထူဖြေရှင်းချက်သည်ကျွန်ုပ်ယခုအထိစမ်းသပ်ခဲ့သောအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Landis + Gyr ပိုလန် Sp ။ z oo
မေလ 20, 2019
ကျွန်ုပ်၌ပြုပြင်ရန်အမှားအယွင်းများရှိသောဖိုင်စကားလုံးဖိုင်တစ်ခုရှိခဲ့သည်၊ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် ၆ မိနစ်အတွင်းစကားလုံးဖိုင်ကိုပြင်ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ 4, 2019
အိုးကောင်းလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်းဒါကိုပြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါမယုံနိုင်ဘူး! အခြားအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်စာသားအတိုင်းကြိုးစားခဲ့ဖူးသည်
ကျွန်ုပ်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်းဒါကိုပြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါမယုံဘူး! အခြားအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်စာသားအတိုင်းကြိုးစားခဲ့ဖူးသည်။
သင်၏အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်လိုအပ်ချက်ရှိပါကထောက်ခံစာရေးရန်ကျွန်ုပ်ဝမ်းသာပါသည်။ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
စက်တင်ဘာ 16, 2015
ငါအရမ်းကျေနပ်ပါတယ် လူတိုင်းကိုသင့်ကိုအကြံပေးလိုပါတယ် ငါလိုချင်ပါတယ်
ငါအရမ်းကျေနပ်မိပါတယ် လူတိုင်းကိုသင့်ကိုအကြံပေးလိုပါတယ် ဆက်ပြီးအောင်မြင်မှုရစေချင်ပါတယ်
ဇန်နဝါရီလ 29, 2019
Word Document Corruption ကြောင့်ဖြစ်တတ်သောအမှားများကိုဖြေရှင်းခြင်းအတွက်ဖြေရှင်းချက်
မာတိကာတွင်ပြProbleနာများရှိသောကြောင့် xxxx.docx ဖိုင်ကိုဖွင့ ်၍ မရပါ
ဖိုင်ကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အမှားသည် Word တွင်ကြုံတွေ့ရသည်
Corrup Word Document ဖွင့်သောအခါဖိုင်ပြောင်းလဲခြင်း Dialog ပေါ်လာမည်
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen Word Repair v4.2
Microsoft Word 6.0, 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 နှင့် Office for Office 365 စာရွက်စာတမ်းများကိုပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု။
Windows နှင့် Mac အတွက် Word မှထုတ်ပေးသောအထောက်အပံ့စာရွက်စာတမ်းများ။
စာသား၊ ရုပ်ပုံများနှင့် Word မှတ်တမ်းများတွင်ပုံစံချခြင်းပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု။
Formatting နှင့် hyperlink များကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်အထောက်အပံ့။
Word မှတ်တမ်းတစ်ခုကို tempo မှပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှုrarဒေတာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါက y ဖိုင်တွေ။
floppy disk များကဲ့သို့ပျက်စီးနေသောမီဒီယာတွင် Word doc နှင့် docx ဖိုင်များကိုပြင်ဆင်ရန်ပံ့ပိုးမှု၊ Zip disk များ၊ CDROM များစသဖြင့်
Word doc နှင့် Docx ဖိုင်များအစုကိုပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု။
Windows Explorer နှင့်ပေါင်းစည်းမှုကိုထောက်ပံ့ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည် Windows Explorer ၏ဆက်စပ်မှု (ညာခလုပ်) မီနူးဖြင့် doc နှင့် docx ဖိုင်များကိုလွယ်ကူစွာပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။
Word ဖိုင်များကိုပြုပြင်ရန် command line (DOS prompt) parameters များကိုထောက်ပံ့ပါ။
အသုံးပြုခြင်း DataNumen Word Repair Corruption Word Documents ကိုပြန်လည်ရယူရန်
သင်၏ Word မှတ်တမ်းများ (* .DOC နှင့် * .DOCX ဖိုင်များ) ပျက်စီးလျှင်သို့မဟုတ်ပုံမှန်အားဖြင့်သင်ဖွင့ ်၍ မရပါကသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ DataNumen Word Repair Word ဖိုင်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး။ အချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သမျှပြန်လည်ရယူရန်။
မှတ်စု: ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသော Word ဖိုင်များကိုပြန်လည်မရယူမီ DataNumen Word Repairကျေးဇူးပြု၍ Microsoft Word နှင့် Word ဖိုင်သို့ဝင်ရောက်နိုင်သောအခြား application များကိုပိတ်ပါ။
ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသော Word .doc / .docx ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။
Word .doc / .docx ဖိုင်အမည်ကိုတိုက်ရိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည် (သို့) ကိုနှိပ်ပါ ဖိုင်ကို browse နှင့် select လုပ်ပါရန် button ကို။ သင်တို့သည်လည်းကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မည် local computer တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက် file ကိုရှာဖွေရန် button ကိုနှိပ်ပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့်, DataNumen Word Repair ပြုပြင်ထားသော Word ဖိုင်ကို xxxx_fixed.doc အဖြစ်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ xxxx သည်ရင်းမြစ် Word .doc / .docx ဖိုင်အမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ source file Damaged.docx အတွက်ပုံသေသတ်မှတ်ထားသောဖိုင်အတွက် Damaged_fixed.doc ဖြစ်သည်။ အခြားအမည်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးပါသို့မဟုတ်ထည့်ပါ။
အကိုကလစ်နှိပ်ပါ ခလုတ်ကို။ DataNumen Word Repair အလိုလိုtart အရင်းအမြစ် Word ဖိုင်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးပြုပြင်ပါ။
ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးပါက၊ အရင်းအမြစ် Word ဖိုင်ကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ပါက၊ အောက်ပါစာတိုလေးကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ယခုအခါသင်သည် Word Word ဖိုင်ကို Microsoft Word သို့မဟုတ်အခြားလိုက်ဖက်သော application များဖြင့်ဖွင့်နိုင်သည်။
DataNumen Word Repair ၃.၂ ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Word Repair ၂.၉ ကို ၂၀၂၀၊ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Word Repair ၁.၁ ကိုနို ၀ င်ဘာ ၅ ရက်၊ ၂၀၀၃ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Word Repair ၁.၄ ကိုမေလ ၂၃ ရက် ၂၀၀၅ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
ဖိုင်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် AI နည်းပညာကိုသုံးပါ။
DataNumen Word Repair 3.1 ကိုဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၉ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
Word 2019 ကိုထောက်ပံ့ပါ။
DataNumen Word Repair ၃.၁ ကို ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Word Repair 2.9 ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Word Repair 2.8 ကိုဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊
Office 365 အတွက်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များ
DataNumen Word Repair 2.7 ကိုဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၉ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
Windows 10 ကိုထောက်ပံ့သည်။
Support Office 2016 ။
DataNumen Word Repair ၂.၅ ကိုဇူလိုင်လ ၃ ရက်၊ ၂၀၁၅ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Word Repair ၂.၁ ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Word Repair 2.0 ကိုဇွန်လ 8, 2013 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Support Word 2007, 2010 နှင့် 2013 formats ။
လျှောက်လွှာ၏ user interface ကိုပြောင်းပါ။
DataNumen Word Repair 1.1 ကိုဇွန်လ 4, 2005 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Microsoft Word 2003 စာရွက်စာတမ်းများကိုပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု။